> Resource> Android> Olee mbupụ Outlook Ndi ana-akpo ka Gmail
Zọpụta nza nke kọntaktsị na Outlook, ma ugbu a, ị ga-amasị nyefee ha gị Gmail? Echegbula. Ọ bụ otu nke achicha nyefee Outlook kọntaktị na Gmail, mgbe i nwere ngwá ọrụ a - Wondershare TunesGo. Na ngwá ọrụ a, ị nwere ike nyefee kọntaktị niile si Outlook gị iPhone, iPod ma ọ bụ iPad, na mgbe ahụ ka gị na kọmputa. Mgbe ahụ, ọ dị mfe n'ihi na ị na mbubata kọntaktị gị Gmail.
Ibudata ngwá ọrụ a ịkwaga kọntaktị site na Outlook ka Gmail.
Wondershare TunesGo-enye gị a ezigbo mfe ngwọta maka ebufe Outlook kọntaktị na Gmail. Ma, ị kwesịrị ị na-iPhone, iPad ma ọ bụ iPod dị ka onye n'etiti ihe.
Ọ bụrụ na ị na-Android onye ọrụ, biko gbalịa Wondershare MobileGo for Android. Nke a Android njikwa na-enye gị ike idetuo kọntaktị niile si Outlook ka Gmail na ala. Download MobileGo for Android na nwere agbalị.
Cheta na: Wondershare TunesGo akwado iPhone 5c / 5 / 5s / 4s, iPod aka 5, wdg na-agba ọsọ iOS 5, iOS 7 ma ọ bụ iOS 6. Tulee dum ndepụta banyere akwado Apple ngwaọrụ.
Export Outlook kọntaktị na Gmail na mfe nzọụkwụ
Ugbu a, wụnye na mgbe ahụ na-agba ọsọ TunesGo na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPhone / iPod / iPad na kọmputa
Jiri eriri USB na-eme ka a njikọ n'etiti iPhone, iPod ma ọ bụ iPad na kọmputa. The iPhone, iPad ma ọ bụ iPod ga-egosi n'elu na isi window mgbe ahụrụ site TunesGo.
Nzọụkwụ 2. Import Outlook kọntaktị na iPhone / iPad / iPod
Na-ekpe sidebar, na-aga "Ndi ana-akpo". Pịa nri ime ka a ọhụrụ kọntaktị ìgwè. Ma ọ bụ ị nwere ike họrọ otu na dị na gị iPhone, iPod ma ọ bụ iPad. Mgbe ahụ, na kọntaktị window, pịa "Import / Export". Mgbe esiri-ala menu egosi, pịa "Import kọntaktị site na kọmputa." Họrọ "si Outlook Express" ma ọ bụ "site Outlook 2003/2007/2010/2013". Mgbe ahụ, TunesGo amalite bubata kọntaktị Outlook gị iPod, iPhone ma ọ bụ iPad.
Nzọụkwụ 3. Nyefee kọntaktị site na iPhone / iPod / iPad na kọmputa
Ugbu a, ihe niile Outlook kọntaktị na-na gị iPhone, iPod ma ọ bụ iPad. Na nke a nzọụkwụ, ị kwesịrị ị na nyefee ndị a kọntaktị na kọmputa. Tinye akà rà kwụsịrị dị Outlook kọntaktị.
Pịa "Import / Export"> "Export kọntaktị ahọrọ" ma ọ bụ "mbupụ niile Ndi ana-akpo"> "ka a Single vCard File" ma ọ bụ "Otutu vCard Files". Na faịlụ nchọgharị window, chọta a ebe ịzọpụta exported vCard faịlụ (s).
Nzọụkwụ 4. Export kọntaktị site na Outlook ka Gmail
Banye na gị Gmail akaụntụ. Na-ekpe sidebar nke Gmail window, pịa "Gmail"> "Ndi ana-akpo". Mgbe ahụ, pịa "Ọzọ" na-egosi ndọpụta menu. Họrọ "Import ...".
Nke a na-elu a mmapụta window. Site na ịpị "Họrọ File", ị ga-esi faịlụ nchọgharị window. Ịnyagharịa ebe ebe vCard faịlụ nke Outlook kọntaktị a zoputara. Mgbe ahụ, pịa "Import" agafeta vcard faịlụ ka Gmail.
Gbalịa TunesGo ịkwaga Outlook kọntaktị na Gmail.
Ọ bụrụ na ị na-eji ihe Android ekwentị gị, nwere ike ịgakwuru Wondershare MobileGo for Android. Na mfe na-eji Android njikwa, na ị na-enwe ike nyefee kọntaktị site na Outlook ka Gmail dị ka mma. The nkuzi bụ fọrọ nke nta ahụ dị ka onye na-TunesGo. Gbalịa MobileGo for Android ka ihe na-mere!
6 Ihe Ndị Ị Maara banyere Smart Gbanye